Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > အမေရိကန်မှ ချီးမြှင့်သည့် အမြင့်ဆုံးဆုကို ဒေါ်စု တက်ရောက်ယူမည်
အမေရိကန်မှ ချီးမြှင့်သည့် အမြင့်ဆုံးဆုကို ဒေါ်စု တက်ရောက်ယူမည်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	| ကြာသပတေးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၅၄ မိနစ်	အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက အရပ်သားများကို ချီးမြှင့်သည့် အမြင့်ဆုံး ဆုတံဆိပ်ဖြစ်သော ‘ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်ရွှေတံဆိပ်ဆု’ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စက်တင်္ဘာလအတွင်း အမေရိကန်သို့ သွားရောက် ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်အရာရှိများက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကြေညာ ပြောဆိုလိုက်သည်။
ဇွန်လ ၁၆ရက်၊ ၂ဝ၁၂ခုနှစ်က အော်စလို စီးတီးခန်းမတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်။ (ဓါတ်ပုံ - AFP) အမေရိကန် လွှတ်တော် နှစ်ရပ်ပေါင်း အစည်းအဝေး၌ ပေးအပ်မည့် အဆိုပါ ဆုယူအခမ်းအနားသို့ သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားနှင့် အဆင့်မြင့် ဥပဒေပြုအမတ် များ တက်ရောက်ဖွယ်ရှိကြောင်း အကဲခတ်များကပြောကြားကြသည်။အဆိုပါ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်၏ အဆင့်မြင့်ဆုံးဆုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရစဉ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ချီးမြှင့်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။အဆိုပါ ခရီးစဉ်အတွင်း အတ္တလန္တိတ်ကောင်စီက ချီးမြှင့်သည့် `ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသား´ဆု ကိုလည်း လက်ခံရယူမည် ဖြစ်ပြီး ဆုပေးအပ်မည့် နေ့ရက်အတိအကျကို မသိရသေးပေ။ အဆိုပါဆုကို ယခင်က သံတမန်ဟောင်း ဟင်နရီ ကစ်ဆင်းဂျား၊ ဂျပန် နိုင်ငံသူ ကုလမသဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ဆာဒါကို အိုဂါးတားနှင့် ဂီတပညာရှင် ကွင်စီဂျုံး တို့ကိုလည်း ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ဖူးသည်။ သူသည် အဆိုပါဆုကို နယူးရောက်မြို့၌ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့တွင် လက်ခံရန် စီစဉ်ထားသည်။ယခုသွားရောက်မည့် အမေရိကန်ခရီးစဉ်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နောက်ဆုံး ကုလသမဂ္ဂ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ၁၉၆၉ မှ ၁၉၇၁ ခုနှစ်အပြီး အမေရိကန်သို့ သွားရောက်သည့် ပထမဆုံး ခရီးစဉ် ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး ဧပြီလတွင် လွှတ်တော်အမတ်တဦးအဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် ကလည်း ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထူးထူးခြားခြား သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့စဉ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀ါရှင်တန်သို့ လာရောက် လည်ပတ်ပါရန် ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပြီး အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများကလည်း ရေနံနှင့်ဓါတ်ငွေ့အပြင် အခြားစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ၌လည်း ၀င်ရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်ရန် တာစူနေကြသည်။အမေရိကန် ထိပ်တန်း စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဌာန အရာရှိကြီးများသည် ယခင်အပတ်ကမြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာအရာရှိများနှင့် စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ဂျင်နရယ် အီလက်ထရစ် ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများရောင်းချကာ ပထမဆုံး စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်သည့် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လျှပ်စစ် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် အခြား စီးပွါးရေး နယ်ပယ်များတွင်လည်း ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်လိုကြောင်း အဆိုပါစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကြီးက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုထားသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လွန်ခဲ့သော ၂၁ နှစ်အတွင်း ၁၅ နှစ်နီးပါးမျှ အကျယ်ချုပ် ဖြင့်နေခဲ့ရပြီး ကမ္ဘာ့အထင်ရှားဆုံး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမား ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ်က နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလက ကျင်းပခဲ့သော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၄၅ နေရာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ၄၃ နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ပထမဆုံးအကြိမ် ဒေါ်စုလှူဒါန်း	ကော့မှူးတွင် ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက်များ ထားရန် ပြန်/ဆက်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဒေါ်စု စီစဉ်နေ	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သင်္ကြန်ကာလ ဂျပန်ခရီးစဉ် စတင်တော့မည်	ချင်းမိုင်ရှိ အမေရိကန်သံရုံးအား အကြမ်းဖက်ခံရမှုမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်	သမ္မတအား ဆုပေးခြင်းသည် ပညာရေးကဏ္ဍနှင့်သာ တွက်ချက် စဉ်းစားခဲ့ခြင်းဖြစ်	အသေးစား ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဒေါ်စု ခရီးစဉ် မဖျက်	ဒေါ်စု ဟောမည့်စင်အတွက် ပြင်ဆင်စဉ် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၍ လူ လေးဦး ဒဏ်ရာရ	Who is Online
We have 91 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved